Accueil Ny Mpitandrina Samihafa Edito
Nifamahofaho tao ny soa sy ny ratsy, tao ny sento sy ny hafaliana, tao ny fahoriana sy ny haravoana. Maro ny toe-javatra nandreraka, nahavery fanantenana teo amin’ny fiainanao manokana, na teo amin’ny ankohonana, na teo amin’ny fiaraha-monina, eny na teo amin’ny fiangonana aza. Matoa anefa ianao mbola nahatratra izao taona vaovao 2006 izao dia noho ny fitiavan’Andriamanitra lehibe anao, Izay nanome an’I Jesoa Zanany hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotana ( Matio 1:21 ). « Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay » (Hebreo 13 :8 ). Jesoa : Andriamanitra no Mpamonjy ; Anaran-tsoa tokoa, fa mifono ao ny zava-tsoa rehetra ilainao enti-mamakivaky ity taona vaovao ity, araka ny sitrapon’Andriamanitra : « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanaky ny Avo.izay rehetra mino Azy dia tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay » ( Jaona 1 :12 ; 3 :16 ). Koa raha manomboka ity taona vaovao ity ianao, dia matokia sy manàna fanantenana fa ho sambatra raha ao anatinao Jesoa, satria Sakaiza tsy mahafoy, Mpamonjy mahavonjy mandrakizay, ary tokin’aina velona tokoa na amin’ny fiainana , na amin’ny fahafatesana Izy. Miovaova izao rehetra izao hoy ny tononkiram-panahy, fa Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ; Vatolampy tsy mivadibadika, manda fiarovana ho anao. Ry havana malala ! tsy ho irery ianao, fa ny Tompo dia efa mialoha làlana anao eo amin’izao tontolo izao ka ho tanteraka aminao anie ny teniny hoe : « Indro, Izaho momba anao ka hiaro anao amin’izay làlan-kalehanao rehetra.fa tsy handao anao Aho »( Gen 28 :15).